Ankilabao taorian’ny fifidianana Mitokona ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana
Rado Ramparaoelina “Tokony ho mpiara-miasa akaiky ny fanjakana sy ny kaominina”
Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny fahalaniana ho ben’ny tanàna teo amin’ny kaominina Ampitatafika taorian’ny fitoriana nataon’ny kandidàn’ny IRK ka nandresy i Rado Ramparaoelina, voafidy tamin’ny antoko TIM.
Ady amin’ny fironana an-tanàn-dehibe Fitsinjaram-pahefana tena izy no vahaolana
Nifantohan’ny adihevitra nanomboka ny faran’ny herinandro teo ny resaka fanesorana mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo Renivohitra.
Governemanta Ntsay Mahatanteraka ny vinan’ny filoha marina ve ?
Feno herintaona i Andry Rajoelina no filoha, karazan-javatra sy fihetsiketsehana maro no nitranga tao anatin’izany.
Rajoelina sy ny IEM Miandry asa tena mivaingana ny vahoaka
Herintaona omaly, 19 janoary 2020, no nanaovan’ ny filoha Rajoelina fianianana teny amin’ ny kianjaben’ i Mahamasina ka nitondrany ny firenena.
Rivo Rakotovao “Aleo ny marina no lazaina !”
Taorian’ny fanambarana nataonà andiana loholona notarihin’ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona faritany Antananarivo,
Filankevitry ny fampihavanana Mila ampifandrindrana ny lalàna sy soatoavina Malagasy
Manaraka tsara ny raharaham-pirenena ny CFM, hoy ny filoha lefiny, Gérard Ramamimampionona, raha nanontaniana ny fipetrak’izy ireo
Tsy misy ampahafolon'ny tambin-karama azon'ireo mpitsara no omena ny mpiraki-draharaha niantsoroka ny fifidianana kanefa samy manao ny asa fikirakirana ny hahatomombana izany.
Nahatsiaro izy ireo fa latsa-danja ny fomba hitantanana ny fitsarana ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana, izay misahana ny fikirakirana ny voka-pifidianana kaominaly, natao ny 27 novambra lasa teo. Tsy mihambo hitovy amin'ireo mpitsara akory izahay, fa mba tsy rariny kosa ny elanelana misy amin'ny fitondrana anay, hoy izy ireo. Niroso tamin'ny fitokonana noho izany izy ireo, saika manerana ny Nosy. Nisy ny fihaonana tamin'ny minisitry ny fitsarana sy ireo mpiara-miasa aminy, ary ny sendikan'ny mpiraki-draharaha. Tsy nivaha anefa ny olana, ka hisy indray anio ny fihaonana miaraka amin'ny Sekretera jeneralin'ny minisiteran'ny asa sy ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana hamahana ny olana. Manamafy hatrany anefa ny sendikan'ny mpiraki-draharaha fa mitohy hatrany ny fitokonana manerana ny Nosy anio zoma 06 desambra 2019.